CISSP လေ့လာမှုပစ္စည်း – အဆိုပါ InfoSec စာမေးပွဲတွင် Crush
အကောင်းဆုံး CISSP လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
စုံလင်သော CISSP လေ့လာမှုပစ္စည်းများရှာဖွေနေသည်သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရသတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေး Professional ကဖြစ်လာဆီသို့ဦးတည်သင့်ရဲ့ခရီးအပေါ်လုပ်အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များ၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်.
The difference between effectively passing or failing the CISSP exam relies upon how well your study materials coordinate with your learning style and schedule.You will be spending countless hours studying it, ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏အသင်ယူမှုစတိုင်ကိုက်ညီသောတစျရှာတွေ့ဖို့အလွန်အရေးပါင့်. မှား prep သင်တန်းကိုသုံးပြီးသင်အောက်ပိုင်းဂိုးသွင်းစေနှင့်သင့်စာမေးပွဲတွင်ကျရှုံးနိုင်ပါတယ်, သငျသညျလေ့လာမှုအချိန်လနှင့်အပိုဆောင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုအခကြေးငွေကုန်ကျ. Crush သေချာဖြစ်ပျက်မဟုတျကွောငျးအောင်ကဒီမှာ!
So here’s the great news – we have personally tested and demoed online the CISSP study materials below so you don’t have to. အောက်ကနှိုင်းယှဉ်ဇယားကိုတဦးတည်းကအကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီသောအသိပါစေရန်သင့်အား enable ပါလိမ့်မယ်.
CISSP Study Materials Discounts & နှိုင်းယှဉ်
ခြုံငုံ Rating ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
ဘ်ဆိုဒ် Simplilearn CISSP ဘွဲ့လွန် X ကို CISSP CISSP ExamPractice Project မှ CISSP ၏အရှင်ဘုရား TRANSCEND CISSP
စျေးနှုန်း $2,899 $2,320
Show ကိုကူပွန် $489 $391
Show ကိုကူပွန် $699 $499
လျှော့ get $335 $399
PRACTICE မေးခွန်းများ 1,250 1,500 N / A N / A 949
ဗွီဒီယိုသငျခနျးစာ 32 hours 50+ hours 35+ hours 10+ hours 23 hours
ပေးမယ်လို့ CPE Credit 35 CPEs / 30 PDUs 35 CPEs 32 CPEs 30 CPEs အဘယ်သူမျှမ
ပုံစံ အွန်လိုင်း, self-အရှိန်အဟုန် အွန်လိုင်း, self-အရှိန်အဟုန် အွန်လိုင်း, self-အရှိန်အဟုန် အွန်လိုင်း, self-အရှိန်အဟုန် အွန်လိုင်း, self-အရှိန်အဟုန်
အာမခံ3Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ 30 Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ အဘယ်သူမျှမ 30 Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ ကသာလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းစာမေးပွဲ Software များတွင်
အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲ Software ကို Demo
FULL-length PRACTICE စာမေးပွဲဖြေဆို
PHONE / EMAIL အတွက်အထောက်အပံ့
ဟုတ်ကဲ့, Plus အားအချိန်မရွေး chat 24/5!
အွန်လိုင်း ACCESS6လပေါင်းများစွာ6လပေါင်းများစွာ6လပေါင်းများစွာ 12 လပေါင်းများစွာ 12 လပေါင်းများစွာ
Get Started ကို NOW က START NOW က START NOW က START NOW က START NOW က START
ခြုံငုံ Rating: ★★★★★
ပိုက်ဆံ-Back ကိုအာမခံ: SimpliLearn offer full money-back guarantee for their CISSP Online Course. သူတို့ကကျောင်းသားတွေကိုခွင့်ပြု3ရက်သင်တန်းကိုစမ်းသပ်ဖို့ Demo သူတို့ကနှစ်သက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်. တစ်စုံတစ်ဦးကမကျေနပ်ကြဖြစ်သင်တန်းတွေ့သေးထက်ပိုမိုဝင်ရောက်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် 50% သူတို့တစ်တွေပြန်အမ်းငွေအဘို့တောင်းဆိုနိုင်သည်အကြောင်းအရာ၏.
ခြင်း simulation စာမေးပွဲများကို: This training comes with5CISSP ခြင်း simulation စာမေးပွဲများကို. Each exam exam of 250 questions and ultimately summing upatotal of 1,250 အွန်လိုင်းမေးခွန်းတွေက. အဆိုပါစာမေးပွဲများအစစ်အမှန် CISSP စာမေးပွဲတူအောင်ဖန်တီးရန်နှင့်ကျောင်းသားလေ့လာမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအကဲဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုရည်ရွယ်.
CPE ချေးငွေ: SimpliLearn ရဲ့ CISSP သင့်ရဲ့ဦးတည်ရေတွက် 35 ဆက်လက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေး (CPE) ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ် 30 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီယူနစ် (PDUs). ဒီအလေ့ကျင့်ရေးသင့်ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးလိုအပ်ချက်များကိုအတူတက်ထားရန်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ချဉ်းကပ်နိုင်ပါတယ်.
SIMPLILEARN CISSP TO GO
ဗီဒီယိုကိုတင်ဆောင်မရနိုင်: CISSP ဖို့နိဒါန်း | CISSP သင်တန်းဗီဒီယိုများ (https://youtu.be/LDNr77sgK2Q)
in-Depth ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ: ကျော်နှင့်အတူ 330 အသေးစားအသေးစိတ်ကိုအပေါင်းတို့၌သော့ချက်အကြောင်းအရာများရှင်းပြမှန်မှန် updated ဗီဒီယိုများ. သူတို့ပြုသမျှပလက်ဖောင်း၏အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း 1st ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်. ဤသည်အချိန်နှင့်တည်နေရာသင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်.
ပွို Value ကို: GraduateX စျေးနှုန်း tag ကို SimiliLearn နှိုင်းယှဉ်ပါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါသည်. သည်အခြားပြိုင်ဘက်ထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနေချိန်မှာသူတို့ထက်ဝက်ကျော်လျော့နည်းဖြစ်ကြပြီးအစိုင်အခဲဟာသူတို့ရဲ့ကျောင်းသားများကိုပူဇော် 30 တစ်ရက်ပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်. If someone finds the course to be unsatisfactory they can request forarefund.
(ISC)2 approved & CPE ချေးငွေ: အလွန်နည်းပါး CISSP သင်တန်းများအမှန်တကယ်အတည်ပြုကြသည်. ဤသည်ကိုအခြားသင်တန်းများမဟုတ်သေးကမ်းလှမ်းမှုပြုကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်. GraduateX ရဲ့ CISSP သင့်ရဲ့ဦးတည်ရေတွက် 35 ဆက်လက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေး (CPE) ခရက်ဒစ်. ဒီသင်တန်းကိုသင့်ဖြစ်ပွားနေသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးလိုအပ်ချက်များကိုအတူတက်စောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါ.
အမြင်အာရုံ, အတွေ့အကြုံများ: You’re going to get the best of what the web brings to the table with this item, as the visual design of the course is astounding. GraduateX ရိုးရှင်းတဲ့ထုံးစံ၌သတင်းအချက်အလက်များတင်ပြ၌ကြီးစွာသောအလုပ်မ, but still using advanced design tools to give you exactly what you need to master the test.
GRADUATEX CISSP TO GO
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သင်ခန်းစာများ: The on-demand CISSP Boot Camp Course is taught by Shon Harris and David Miller through interactive lessons intended for your busy schedule. You have the choice to finish the programs all together, or return to training lessons as many times as you like.
CPE ချေးငွေမပါဝငျ: သင် CISSP ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျမြားကိုလညျးပြီးစီးခဲ့ပါပြီလိမ့်မယ် 32 သင့်ရဲ့ CISSP လိုင်စင်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဆီသို့ဦးတည်သွားရနိုင်သည်ကို CPE ခရက်ဒစ်. You will be givenacourse certification to demonstrate the completion of the CPE credits.
အခမဲ့ Demo: CISSP Exam Practice offersafree demo for you to try out the lessons. You should simply tap the “Course Demo” button on the CISSP course description page and you will have the permission to experiment withafew lessons.
ဗီဒီယိုကိုသင်တန်း: This course offers you an incredible opportunity to simulate future workplaces and play out genuine situations with its unrivaled full-motion video training. With such broad choices in this regard, you’ll be set up for test inamatter of time, particularly given the considerable nature of instruction that accompanies each course.
CISSP EXAMPRACTICE TO GO
3. Project မှအကယ်ဒမီ CISSP ၏အရှင်ဘုရား
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သင်ခန်းစာများ: The on-demand CISSP Boot Camp Course is taught by Mohamed Atifaspecialist and certified teacher with over 20 အတွေ့အကြုံအနှစ်. မိုဟာမက်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်တို့နှင့်ကြီးသောခြုံငုံကျောင်းသားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရှည်လျားသောစာရင်းရှိပါတယ်.
CPE ချေးငွေမပါဝငျ: သင် CISSP ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျမြားကိုလညျးပြီးစီးခဲ့ပါပြီလိမ့်မယ် 30 သင့်ရဲ့ CISSP လိုင်စင်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဆီသို့ဦးတည်သွားရနိုင်သည်ကို CPE ခရက်ဒစ်. You will be givenacourse certification to demonstrate the completion of the CPE credits.
အခမဲ့ Demo: Master of Project Academy CISSP Exam Practice offersafree demo for you to try out the lessons. You should simply tap the “Course Demo” button on the CISSP course description page and you will have the permission to experiment withafew lessons.
ပိုက်ဆံ-Back ကိုအာမခံ: MPA offers full money-back guarantee for their course. သူတို့ကကျောင်းသားတွေကိုခွင့်ပြု3ရက်သင်တန်းကိုစမ်းသပ်ဖို့ Demo သူတို့ကနှစ်သက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်. တစ်စုံတစ်ဦးကမကျေနပ်ကြဖြစ်သင်တန်းတွေ့သေးထက်ပိုမိုဝင်ရောက်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် 50% သူတို့တစ်တွေပြန်အမ်းငွေအဘို့တောင်းဆိုနိုင်သည်အကြောင်းအရာ၏.
4. TRANSCEND CISSP
ကျောင်းသားသမဂ္ဂပံ့ပိုးမှု: ဒီအ eLearning သင်တန်းစာရင်းသွင်းကျောင်းသားများအဖွဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေနှင့် CISSP လက်မှတ်မှလမ်းတစ်လျှောက်ကိုကူညီနိုင်မယ့်အသက်ရှင်သောအကြောင်းအရာကိစ္စကျွမ်းကျင်သူမှ access ကိုရလိ​​မ့်မည်. ရရှိနိုင်သောကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးရှိခြင်းသည်တစ်စိတ်ကူး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, က CISSP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အထောကျအကူများနှင့်တိကျသောအဖြေကိုရရန်ခွင့်ပြုသည်အဖြစ်.
သင်တန်းအမှတ်စဥ်အကြောင်းအရာ: You can get more out of the Transcender eLearning course by consolidating it with their training exam program. ကိုပေါင်းစပ်ပြီး2ဒီသင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းများသင်ပေးသည် 23 သင်တန်းကိုဆုံးမသွန်သင်နာရီ, 949 အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေက, နှင့် 1,040 ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့စာလုံးကတ်. The practice exam program comes of an additional $169 နှင့်သင်အချိန်စာမေးပွဲယူပြီးအားဖြင့်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံက customize မှခွင့်ပြု, သင်တို့အပေါ်မှာစုံစမ်းစေချင်ပါတယ်ရသောရည်ရွယ်ချက်များကိုနှိပ်ပြီး ', and testing yourself with flashcards.
အခမဲ့ Demo: They are so certain about their training exam program that they offerafree demo of it. Students will need to makeafree account and allow pop-ups in their web program to get to the demo. The demo allows the students to getasmart thought of how Transcender’s CISSP practice exams work.
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: Having various examination choices with long term access makes the Transcender CISSP training an incredible and flexible choice forawide range of students.
TRANSCEND CISSP TO GO
CISSP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသိကောင်းစရာများ & လှည့်ကွက်
The consistently changing digital universe of information technology is developing atacolossal pace. The reliance of governments, business and individuals on the IT framework has made it an alluring jackpot for criminals. ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်, vandalism and hacking have fetched organizations billions. Most recent wanna-cry attack has already exposed several vulnerabilities.
One of the reason for failed security measures that surrender in front of advance threats is the incompetency of information security professionals. အိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပုံမှန် coding မြင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအလုပ်စဉ်းစားသည်, scripting နည်းပေမယ့်မျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြံထက်နှင့်အတူ. ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူ aligned မဟုတ်ခဲ့အားထုတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်.
Many certifications are available in market that accredit the expertise of information security professionals. The certifications help potential selection representatives and market asawhole to check the information security expertise of an expert. In the ocean of increasing certifications Certified Information System Security Professional (CISSP) rose as the best quality level because of its magnificent arrangement between specialized expertise and business learning. CISSP is the most all inclusive perceived accreditation in the data security showcase. Required by the world’s most security-consciuos associations, CISSP သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာဒီဇိုင်းရန်လေးနက်အထူးပြုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်အာမခံသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမောင်းနှင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်, တည်ဆောက်, နှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အထွေထွေလုံခြုံရေးကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း.
CISSP ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ISC2 နေဖြင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းနေသည်, CISSP လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုကျင်းပသောအဖှဲ့အစညျး. သူတို့ကဖော်ပြ
"အဆိုပါရောင်းချသူ-ကြားနေ CISSP လက်မှတ်သက်သေနက်ရှိုင်းသောနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အချင်းကိုနှင့်အတူသူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးအထောက်အထားများဖြစ်ပါသည်, ကျွမ်းကျင်မှု, အတှေ့အကွုံ, နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဒီဇိုင်း, အင်ဂျင်နီယာ, implement, နှင့်ကြီးထွားလာခေတ်မီတိုက်ခိုက်မှုမှသည်အဖွဲ့အစည်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ခြုံငုံသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲ"
ထို့ကြောင့် CISSP စာမေးပွဲကိုစမ်းသပ်မှုနှင့်နည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု domains များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးဟာလူတစ်ဦးရဲ့အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအတည်ပြုရန်. အောက်ပါအပိုင်း၌ငါ CISSP Aspire ၏စိတျထဲမှာပျေါပေါကျကြောင်းအမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းများကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်.
ငါဘယ်လိုအဆိုပါ CISSP ဖြတ်သွားနိုင်သလား?
သငျသညျရှိပါက5ထဲကဆိုနှစ်ဦးကိုနယ်ပယ်များတွင်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအတွေ့အကြုံအနှစ် 8 CISSP နှင့်သင်၏ domains များစမ်းသပ်ရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်. CISSP အကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ကထိုက်တန်စေသည်. အဆိုပါ 8 CISSP ၏ domains များဖြစ်ကြသည်
identity နှင့် Access ကစီမံခန့်ခွဲမှု
Software Development လုံခြုံရေး
ဒါကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်5လိုချင်သောနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံအနှစ်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာကိုစတင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သို့သော် CISSP တစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာမလာပါဘူး. invetment တစ်တွေအများကြီး CISSP လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများသို့မတက်ရောက်လိုအပ်ပါသည်, CISSP ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့် CISSP သင်ယူမှုပစ္စည်းဝယ်ယူ. CISSP စာမေးပွဲကိုကိုယ်နှိုက်ကကုန်ကျစရိတ် $600. Most of the free material accessible on web is from old 10 domain design.
အဆိုပါ CISSP စမ်းသပ်ခြင်းတွင်ဆိုတာဘာလဲ?
A journey is successful if the goals are well defined and understood. CISSP စမ်းသပ်နားလည်ခြင်း, ဒါဘာလဲ, သင်စမ်းသပ်ကြောင့်တကယ်အလွန်ကြီးမားသောတာဝန်အဘို့ခိုင်ခံ့အခြေစိုက်စခန်းပေါ်တွင်သင်ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့သတ်မှတ်နိုင်သည်မည်သို့. အဆိုပါရှည်လျားသော6နာရီ 250 မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို, သင့်ရဲ့အသိပညာစမ်းသပ်ရန်, သည်းခံခြင်းနှင့်ဇွဲ. ဒါဟာလေ့လာမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်, အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ, လက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့် CISSP အသိပညာဒေသများအပေါ်ခိုင်မာတဲ့အယူအဆရေးရာဆုပ်ကိုင်.
1. လုံခြုံရေးနှင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု 16%
2. Asset လုံခြုံရေး 10%
3. လုံခြုံရေးအင်ဂျင်နီယာဌာန 12%
4. ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကွန်ယက်လုံခြုံရေး 12%
5. identity နှင့် Access ကစီမံခန့်ခွဲမှု 13%
6. လုံခြုံရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း 11%
7. လုံခြုံရေး Operations 16%
8. Software Development လုံခြုံရေး 10%
As you witness the inquiries will be well spread over all spaces and true endeavors must be made to ace every one of the 8 domain များ. All the questions in CISSP don’t carry equal marks. The value of every question depends on its difficulty level. In addition to these 25 questions are experimental which are included for test purposes. These questions are not rated for calculation of your last score. In any case you can’t separate between these test questions and the evaluated ones.
ဘယ်လို CISSP စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်
CISSP အပေါငျးတို့သ၏အသိပညာလိုအပ်ပါတယ် 8 အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ domains များ. သင့်အနေဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်အောက်ပါလေးအရင်းအမြစ်များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
CISSP Boot တက်စခန်းသို့မဟုတ် CISSP သင်တန်းများ
စာအုပ်သင်၏ရွေးချယ်မှုသင်သည်သင်၏လေ့လာမှု၏အတိုင်းအတာများနှင့်သမိုင်းမှတ်တိုင်များဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်. အကြံပေးလို CISSP (ISC)2 သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေး Professional ကတရားဝင်လေ့လာမှုလမ်းညွှန် 7th Edition ကို. ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောနှင့်အတူ Amazon ပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောစာအုပ်များထဲမှင်5ကြယ်ပွင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း. အဆိုပါစာအုပ်ကောင်းစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အစုံစုံဖြစ်ပါတယ်. ပေးထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့် CISSP စာမေးပွဲကိုနှင့်အတူဆက်စပ်မဟုတျကွောငျးအဘယ်သူမျှမပိုအသေးစိတ်လည်းမရှိ. အဆိုပါစာအုပ်သို့ကွဲပြား 21 အဆိုပါစာဖတ်ခြင်းနှင့်နားလည်မှုလွယ်ကူအောင်တာဝန်ယူထားသောဖြစ်ကြောင်းအခန်းကြီး.
ဒီအဓိကစာအုပ်အပြင်သင်အမြဲသဘောတရား၏အတိမ်အနက်ကိုအတွက်နားလည်မှုများအတွက်အပိုဆောင်းစာအုပ်တွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်. all-in-One ကိုစာမေးပွဲလမ်းညွှန် CISSP သင့်ရဲ့အားနည်းသည့်အကြောင်းအရာများကတဆင့်သွားဘို့အကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်အသေးစိတ် oriented စာအုပ်အစားတဦးတည်းနှင့်သာစာအုပ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၏ရည်ညွှန်းအဖြစ်သာအသုံးပြုသင့်. စာအုပ်များအားဖြင့် အဲရစ် Conrad လည်းချီးကျူးထောပနာနှင့်အလွန်အမင်း CISSP စမ်းသပ် takers အားဖြင့် rated နေကြတယ်.
A lot of free and paid video lectures that are available in the market. The most effective ones are by Cybrary အပေါ်ကယ်လီ Handerhan. Her lectures are brief, to the point and creates the mindset which is very important for passing CISSP test. CISSP အန္တရာယ်မန်နေဂျာတစ်ဦးအနေအထား၌သင်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိ, ဤအရပ်မှအားလုံးသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်အခြေအနေတွင်အပေါ်အခြေခံပြီးရမည်ဖြစ်သည်. The great news is that lectures the are free of cost.
3. CISSP Boot တက်စခန်းများ
4. CISSP သင်တန်းဘို့အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှု
Sybex စမ်းသပ်ခြင်းဘဏ်: ဒါကစာအုပ်နှင့်အတူကြွလာနှင့်တန်ဖိုးသိသိသာသာဖြည့်စွက်. ရှိပါတယ် 20 နှင့်အတူအသီးအသီးအခနျးကွီးအတှကျမေးခှနျးတှေ (4) 250 မေးခွန်းများကိုအပြည့်အဝစာမေးပွဲ.
McGraw ဟေးလ် အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲ. ဤရွေ့ကား CISSP အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုနဲ့ audio ပို့ချချက် Shon Harris ကနှင့် Logical လုံခြုံရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်. ကျနော်တို့ပိုကောင်း CISSP အဘို့အသငျသညျပွငျဆငျခွငျးလိမ့်မည်ဟုမေးခွန်းများနှင့်ဟောပြောပွဲဖိုင်တွေရဲ့ပြည့်စုံတစ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့.
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော CISSP လက်မှတ်
အဆိုပါ CISSP ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့တရားဝင်သည်; အများဆုံးကိုင်ဆောင်သူတည်မြဲသည့် Professional ကပညာရေးတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သက်တမ်းတိုး (CPE) ခရက်ဒစ်. တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်အဖွဲ့ဝင်ကြေးလည်းရှိပါသည် $85 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်
A survey reports that the highest concentration of CISSPs are located in DC, နယူးယောက်နှင့်အတ္တလန်တာဂျော်ဂျီယာ. အမြင့်ဆုံးပျမ်းမျှအားလစာနှင့်အတူမြို့က NYC ခဲ့သည်, $ 119.840 / နှစ်မှာလာမယ့်.
CISSP အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်၏ကိုင်ဆောင်သူအထူးပြုများ၏ဒေသများရှိနောက်ထပ်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်. သုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်:
သတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေးဗိသုကာ Professional က (CISSP-ISSAP). The architect playsavital role within the information security department with responsibilities that functionally fit between the C-suite and upper managerial level and the implementation of the security program.
သတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေးအင်ဂျင်နီယာ Professional က (CISSP-ISSEP), ကထုတ်ပေးထားတဲ့အဆင့်မြင့်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးလက်မှတ် (ISC)2 သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအင်ဂျင်နီယာရှုထောင့်အပေါ်အလေးပေး. ISSEP စီမံကိန်းများသို့လုံခြုံရေးထည့်သွင်းများအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည်, လျှောက်လွှာများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်များ, လူအပေါင်းတို့သည်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ.
သတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု Professional က (CISSP-ISSMP), ကထုတ်ပေးထားတဲ့အဆင့်မြင့်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးလက်မှတ် (ISC)2 သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုရှုထောင့်အပေါ်အလေးပေး. တစ်ဦး ISSMP တည်ထောင်ရန်, လက်ဆောင်, နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များသရုပ်ပြသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များကိုအုပ်ချုပ်
နမူနာ Sybex စမ်းသပ်ခြင်းမေးခွန်းများ
ကို Maintenance ချိတ်
အဖွေ: ကို C
A covert storage channel conveys information by writing data toacommon storage area where another process can read it. ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက် data တွေကိုလုံခြုံအောင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုသူဒေတာကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်မိတ်ဆက်.
တစ်ဦးကအသုံးပြုသူရဲ့ privacy ကို
အဖွေ: : D
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပြုပါရှိရာသုံးစွဲသူများကိုအကြောင်းကြားရန်နှင့်အသုံးပြုသူလှုပ်ရှားမှုစာရင်းစစ်နှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့ကုမ္ပဏီ၏လက်ျာ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ privacy ကိုအကျိုးကျေးဇူးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဖြစ်ပါတယ်.
CCCure Quizzer မေးခွန်းတစ်ခုကိုအမြည်း
ဂျင်းတသမတ်တည်းထုတ်ကုန်အစီရင်ခံစာများမှအမျိုးမျိုးသောကွန်ယက်ကိုစနစ်များ၏စာရင်းစစ်မှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုတဲ့သူအနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်ဖြစ်ပါသည်. အိုင်တီရဲ့ VP အီးမေးလ်ခုနှစ်တွင်, သူမကသင့်လျော်သောကာကွယ်မှုထိန်းချုပ်မှုဟာစာရင်းစစ်မှတ်တမ်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရာအရပျ၌ထားကြသည်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်အလေးပေး. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမျှတမှုများ, သာ. ဆင်းရဲအရာဖြစ်ပါသည်.
စာရင်းစစ်မှတ်တမ်းများမှပိတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံကို automation ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုထိခိုက်စေ.
စုံစမ်းစစ်ဆေး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, တစ်ခုအကာအကွယ်မဲ့စာရင်းစစ်မှတ်တမ်းတရားရုံးတွင် inadmissible ယူဆစေခြင်းငှါ.
အဖွေ: B က
စာရင်းစစ်မှတ်တမ်းများမှပိတ်အပြောင်းအလဲများ, အဆိုးအစီရင်ခံ၏အလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သော, လုံခြုံရေး၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဟုတျပါ. စာရင်းစစ်မှတ်တမ်းများမှတ်တမ်းများ၏သမာဓိနှင့်လျှို့ဝှက်သေချာစေရန်ကာကွယ်ထားကြသည်.
နမူနာ McGraw ဟေးလ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို
တစ်ဦး DRP ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွင်းပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကဘာလဲ(သဘာဝဘေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်)
ကုမ္ပဏီလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်, အပြိုင်သို့မဟုတ်ခြင်း simulation စမ်းသပ်.
တစ်ဦး BIA Perform(စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း)
တစ်ဦးက BIA ကုမ္ပဏီ၏အရေးပါသောစနစ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖော်ထုတ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဌာနတို့မှကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းပါဝင်သည်. ခဲလျှင်စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ကုမ္ပဏီရင်ဆိုင်နေရသည့်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ဤခြိမ်းခြောက်မှုအလားအလာကုန်ကျစရိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖျော်ဖြေရန်လိုအပ်ပါသည်.
ထိပ်တန်း3Best CISSP လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
စျေးနှုန်းကို $499 $399 $599
အလေ့အကျင့်ရှိသောမေးခွန်းများ N / A 949 1,250
ဗီဒီယိုကိုသင်ခန်းစာ 35+ hours 23 hours 32 hours
အာမခံချက် အဘယ်သူမျှမ ကသာလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းစာမေးပွဲ Software များတွင်3Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ
အွန်လိုင်း Access ကို6လပေါင်းများစွာ 12 လပေါင်းများစွာ 180 နေ့ရက်များ
April 5, 2018 /0 မှတ်ချက်များ/အားဖြင့် ဂျိမ်း Edge
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-5.png 500 500 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-02-20 17:46:33အကောင်းဆုံး CISSP လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
အကောင်းဆုံး CISSP အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
လက်ျာ CISSP သင်တန်းရွေးချယ်ခြင်းသင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရသတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေး Professional ကဖြစ်လာရန်သင့်ခရီးအပေါ်စေမည်အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်.
အောင်မြင်စွာ CISSP စာမေးပွဲကိုဖြတ်သန်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်အကြားခြားနားချက်အကြီးအကျယ်သင့်ရဲ့လေ့လာမှုပစ္စည်းများသင့်ရဲ့သင်ယူမှုစတိုင်နှင့်အချိန်ဇယားကိုကိုက်ညီဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပေါ်မူတည်. သငျသညျလေ့လာနေနာရီရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ပင်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြုန်းပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကြောင်းလေ့လာမှုလမ်းညွှန်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်အရေးပါင်. မှား prep သင်တန်းကိုသုံးပြီးသင်အောက်ပိုင်းဂိုးသွင်းစေနှင့်သင့်စာမေးပွဲတွင်ကျရှုံးနိုင်ပါတယ်, သငျသညျလေ့လာမှုအချိန်လနှင့်အပိုဆောင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုအခကြေးငွေကုန်ကျ. Crush သေချာဖြစ်ပျက်မဟုတျကွောငျးအောင်ကဒီမှာ!
ဒီတော့ဒီမှာကသတငျးကောငျးရဲ့: ကြှနျုပျတို့ကိုယျတိုငျသင်တို့အဘို့အရာတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံး CISSP အွန်လိုင်းသင်တန်းများအပေါငျးတို့သသုတေသနပြုခဲ့ကြ! အောက်ကနှိုင်းယှဉ်ဇယားကိုသင်အကောင်းဆုံးသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီသည့်တဦးတည်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
နှိုင်းယှဉ်အကောင်းဆုံး CISSP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ:
ဘ်ဆိုဒ် CISSP ExamPractice Simplilearn CISSP ဘွဲ့လွန် X ကို CISSP Project မှ CISSP ၏အရှင်ဘုရား TRANSCEND CISSP
စျေးနှုန်း $699 $499
လျှော့ get $2,899 $2,320
Show ကိုကူပွန် $335 $399
PRACTICE မေးခွန်းများ 1,000+ 1,250 1,500 1,000 949
ဗွီဒီယိုသငျခနျးစာ 35+ hours 32 hours 50+ hours 10+ hours 23 hours
ပေးမယ်လို့ CPE Credit 32 CPEs 35 CPEs / 30 PDUs 35 CPEs 30 CPEs အဘယ်သူမျှမ
အာမခံ အဘယ်သူမျှမ3Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ 30 Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ 30 Day ကိုငွေရှာ-Back ကိုအာမခံ ကသာလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းစာမေးပွဲ Software များတွင်
FULL-length PRACTICE စာမေးပွဲဖြေဆို 10 ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ
အကောင်းဆုံး CISSP လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ:
ExamPractice CISSP လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
SimpliLearn CISSP ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း
GraduateX CISSP အွန်လိုင်းသင်တန်း
Project မှအကယ်ဒမီ CISSP ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း၏အရှင်ဘုရား
TRANSCEND CISSP လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
1. CISSP ExamPractice
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သင်ခန်းစာများ: အဆိုပါ On-demand CISSP Boot Camp သင်တန်းအလုပ်များသောသင့်အချိန်ဇယားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအပြန်အလှန်သင်ခန်းစာများမှတဆင့် Shon Harris ကနှင့်ဒါဝိဒ် Miller ကဆုံးမသွန်သင်နေသည်. သငျသညျနိုင်ရန်အတွက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြည့်စွက်ရန် option ရှိသည်, သို့မဟုတ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအဖြစ်ပြန်လည်သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြိုက်သလောက်.
CPE ချေးငွေမပါဝငျ: သင် CISSP ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျမြားကိုလညျးပြီးစီးခဲ့ပါပြီလိမ့်မယ် 32 သင့်ရဲ့ CISSP လိုင်စင်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဆီသို့ဦးတည်သွားရနိုင်သည်ကို CPE ခရက်ဒစ်. သငျသညျကိုလညျး CPE ခရက်ဒစ်၏ပြီးစီးသက်သေပြမယ့်သင်တန်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်.
အခမဲ့ Demo: သင်အပြန်အလှန်သင်ခန်းစာများကိုထုတ်စမ်းသပ်ဖို့အတှကျ CISSP စာမေးပွဲအလေ့အကျင့်အခမဲ့သရုပ်ပြကမ်းလှမ်း. သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည် CISSP သင်တန်းဖော်ပြချက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် "သင်တန်း Demo" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှငျ့သငျအများအပြားသင်ခန်းစာများစမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်.
ဗီဒီယိုကိုသင်တန်း: ဒီသင်တန်းကိုသင်အနာဂတ်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတူအောင်ဖန်တီးနှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ကင်း Full-ရွေ့လျားမှုဗီဒီယိုကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းနှင့်အတူစစ်မှန်သောဘဝအခြေအနေတွေထွက်ကစားရန်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း. ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းထိုသို့သောကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ, သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌စမ်းသပ်မှုနေ့အဘို့ကိုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်, အထူးသဖြင့်အသီးအသီးသင်တန်းနှင့်တကွကြွလာသည်ဟုဆုံးမသွန်သင်၏အကြီးအရညျအသှေးပေးထား.
2. SimpliLearn CISSP့Prep သင်တန်းအမှတ်စဥ်
ပိုက်ဆံ-Back ကိုအာမခံ: SimpliLearn မိမိတို့ကျောင်းသားများ၏တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်း3တစ်ရက်ပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်. သင်ပထမဦးဆုံးအတွင်းသင်တန်းနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်3အသုံးပြုမှု၏ရက်ပေါင်းသင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင့်ထက်ပိုပြီးဝင်ရောက်ကြပြီမဟုတ်အဖြစ်ပြန်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံတောင်းဆိုနိုင်ပါသည် 50% သင်တန်း၏.
ခြင်း simulation စာမေးပွဲများကို: ဒီအလေ့ကျင့်ရေးနှင့်တကွသင်ထောက်ပံ့5CISSP ခြင်း simulation စာမေးပွဲများကို. တစ်ခုချင်းစီကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပါဝင်ပါသည် 250 စုစုပေါင်းအဘို့မေးခွန်းများကို 1,250 အွန်လိုင်းမေးခွန်းတွေက. အဆိုပါစာမေးပွဲများအစစ်အမှန် CISSP စာမေးပွဲတူအောင်ဖန်တီးရန်နှင့်သင်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ရည်ရွယ်.
CPE ချေးငွေ: SimpliLearn ရဲ့ CISSP သင့်ရဲ့ဦးတည်ရေတွက် 35 ဆက်လက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေး (CPE) ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ် 30 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီယူနစ် (PDUs). ဒီသင်တန်းကိုသင့်ဖြစ်ပွားနေသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးလိုအပ်ချက်များကိုအတူတက်စောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါ.
ကိုကာကွယ်ဖို့ 30% – CEH – SimpliLearn ကူပွန် Code ကို
Email လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ အနာဂတ်အထူးလျှော့စျေးနှင့် ပတ်သက်. Post ငါ့ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
SimpliLearn, ရာခိုင်နှုန်းလျှော့, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
SimpliLearn 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 30% SimpliLearn CEH လျှော့ OFF
ရယူ 30% OFF SimpliLearn အွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်သင်ယူချွတ်!
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 39 minutes ago
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: April 28, 2018
ကိုကာကွယ်ဖို့ 30% – SimpliLearn ကူပွန် Code ကို – CISA
SimpliLearn, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
SimpliLearn 34 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 30% SimpliLearn CISA လျှော့ OFF
ရယူ 30% OFF SimpliLearn အွန်လိုင်းကိုယ်ပိုင်သင်ယူချွတ်!
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 1 နာရီအကြာက
ကိုကာကွယ်ဖို့ 30% – Crisco – SimpliLearn ကူပွန် Code ကို
SimpliLearn, ရှားပါးအရောင်း, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး, အခြား 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
SimpliLearn 36 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် 30% SimpliLearn CRISC လျှော့
subscriber များအား get Crush များအတွက်သီးသန့် 30% OFF SimpliLearn အွန်လိုင်းကိုယ်ပိုင်သင်ယူချွတ်!
နောက်ဆုံးအသုံးပြု3နာရီအကြာက
ကိုကာကွယ်ဖို့ 30% – CISA – SimpliLearn ကူပွန် Code ကို
SimpliLearn, ရှားပါးအရောင်း, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
SimpliLearn 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် 30% SimpliLearn CISA အွန်လိုင်းလျှော့
ကိုကာကွယ်ဖို့ 30% – CISSP – SimpliLearn တိုက်ရိုက်သင်ယူကူပွန် Code ကို
SimpliLearn, ရှားပါးအရောင်း, ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ရယူ 30% သွား Simplilearn CISSP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်း
သာ Lmited အချိန်.
ကိုကာကွယ်ဖို့ 30% – CISM – SimpliLearn ကူပွန် Code ကို
SimpliLearn, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, နက်ရှိုင်းသောအထူးလျှော့စျေး 36 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 30% SimpliLearn CISM လျှော့ OFF
3. ဘွဲ့လွန် X ကို CISSP ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း
in-Depth ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ: ကျော်နှင့်အတူ 330 မှန်မှန်သင်သည်ပျောက် get ဘယ်တော့မှအသေးစိတ်အပေါင်းတို့၌သော့ချက်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်အတူ updated ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြဗီဒီယိုများ. သူတို့ပြုသမျှပလက်ဖောင်း၏အကောင်းဆုံးဖော်ရွေအလွန်မိုဘိုင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင်ကကမ်းခြေပေါ်င်ရှိမရှိသင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်အပေါ်လေ့လာဖို့ option ကိုပေးသည်, အဆိုပါအိပ်ရာပေါ်ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ပဲအိမ်မှာ.
ပွို Value ကို: GraduateX တစ်ကယ့်ကိုတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာလာ. သည်အခြားပြိုင်ဘက်ထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနေချိန်မှာသူတို့ထက်ဝက်ကျော်လျော့နည်းဖြစ်ကြပြီးအစိုင်အခဲဟာသူတို့ရဲ့ကျောင်းသားများကိုပူဇော် 30 တစ်ရက်ပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်. သင်ပထမဦးဆုံးအတွင်းသင်တန်းနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင် 30 အသုံးပြုမှု၏ရက်ပေါင်းသင်ပြန်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်.
အမြင်အာရုံ, အတွေ့အကြုံများ: သင်ကဝက်ဘ်ဒီထုတ်ကုန်နှင့်အတူပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်အရာကိုအကောင်းဆုံးရမယ့်နေ, သင်တန်း၏အမြင်အာရုံ layout ကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သကဲ့သို့. GraduateX ရိုးရှင်းတဲ့ထုံးစံ၌သတင်းအချက်အလက်များတင်ပြ၌ကြီးစွာသောအလုပ်မ, သို့သော်သင်စမ်းသပ် Ace ဖို့လိုအပ်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပေးရအဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်း tools တွေသုံးပြီး.
ကိုကာကွယ်ဖို့ 20% GraduateX CEH ကူပွန် Code ကို
GraduateX, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, သီးသန့်အထူးလျှော့စျေး 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
GraduateX 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 20% သွား GraduateX လက်မှတ်ရ Ethical Hacking သင်တန်း
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 44 minutes ago
ကိုကာကွယ်ဖို့ 20% GraduateX CISSP ကူပွန် Code ကို
GraduateX, ဟာ Off ဒေါ်လာပမာဏ, နက်ရှိုင်းသောအထူးလျှော့စျေး 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
GraduateX 38 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 20% သွား GraduateX CISSP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်း
နောက်ဆုံးအသုံးပြု2နာရီအကြာက
4. Project မှအကယ်ဒမီ CISSP ၏အရှင်ဘုရား
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သင်ခန်းစာများ: အဆိုပါ On-demand CISSP Boot Camp သင်တန်းအမှတ်စဥ်မိုဟာမက် Atif အားဖြင့်ထက်ပိုမိုအတူအတိုင်ပင်ခံနှင့်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းသင်တန်းပို့ချသင်ကြားသည် 20 အတွေ့အကြုံအနှစ်. မိုဟာမက်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်တို့နှင့်ကြီးသောခြုံငုံကျောင်းသားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရှည်လျားသောစာရင်းရှိပါတယ်.
CPE ချေးငွေမပါဝငျ: သင် CISSP ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျမြားကိုလညျးပြီးစီးခဲ့ပါပြီလိမ့်မယ် 30 သင့်ရဲ့ CISSP လိုင်စင်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဆီသို့ဦးတည်သွားရနိုင်သည်ကို CPE ခရက်ဒစ်. သငျသညျကိုလညျး CPE ခရက်ဒစ်၏ပြီးစီးသက်သေပြမယ့်သင်တန်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်.
အခမဲ့ Demo: Project မှအကယ်ဒမီ၏အရှင်ဘုရား CISSP သင်သင်ခန်းစာများကိုထုတ်စမ်းသပ်ဖို့အတှကျအခမဲ့သရုပ်ပြပါဝင်သည်. သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည် CISSP သင်တန်းဖော်ပြချက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိ "ကို Preview" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှငျ့သငျအများအပြားသင်ခန်းစာများစမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်.
ပိုက်ဆံ-Back ကိုအာမခံ: မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မိမိတို့၏ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးကမ်းလှမ်း 30 တစ်ရက်ပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်. သင်ပထမဦးဆုံးအတွင်းသင်တန်းနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင် 30 အသုံးပြုမှု၏ရက်ပေါင်းသင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင့်ထက်ပိုပြီးဝင်ရောက်ကြပြီမဟုတ်အဖြစ်ပြန်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံတောင်းဆိုနိုင်ပါသည် 50% သင်တန်း၏.
5. TRANSCEND CISSP
သင်တန်းအမှတ်စဥ်အကြောင်းအရာ: သင်သည်သူတို့၏အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်အတူကပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့် TRANSCEND eLearning သင်တန်းထဲကပိုပြီးရနိုင်. ကိုပေါင်းစပ်ပြီး2ဒီသင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းများသင်ပေးသည် 23 သင်တန်းကိုဆုံးမသွန်သင်နာရီ, 949 အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေက, နှင့် 1,040 ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့စာလုံးကတ်. အဆိုပါအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲဖြေဆို program ကိုတစ်ဦးအပိုဆောင်းဖြစ်ပါသည် $169 နှင့်သင်အချိန်စာမေးပွဲယူပြီးအားဖြင့်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံက customize မှခွင့်ပြု, သင်တို့အပေါ်မှာစုံစမ်းစေချင်ပါတယ်ရသောရည်ရွယ်ချက်များကိုနှိပ်ပြီး ', နှင့်စာလုံးကတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို quizzing.
အခမဲ့ Demo: သူတို့ကသူတို့ကတစ်အခမဲ့ demo ကိုဆက်ကပ်သောထိုသူတို့၏အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲဖြေအစီအစဉ်မှာဒါယုံကြည်ပါတယ်. ကျောင်းသားများအခမဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ web browser မှာ pop-ups အဆိုပါသရုပ်ပြဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါသရုပ်ပြသင်ယူသူ TRANSCEND ရဲ့ CISSP အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်တစ်ဦးကောင်းစိတ်ကူးရခွင့်ပြု. အဆိုပါသင်တန်းကို eLearning အခမဲ့ Demo ရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသရုပ်ပြသင်သင်တန်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို၏အထွေထွေစိတ်ကူးပေးသင့်.
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူမျိုးစုံလေ့လာမှု options များထားရှိခြင်း TRANSCEND CISSP သင်ယူသူအမျိုးအစားအားလုံးကိုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေးချယ်မှုလေ့ကျင့်စေသည်.
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏အစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆိုက်ဘာကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့အရှိန်အဟုန်မှာကြီးထွားလာသည်. အစိုးရများ၏မှီခို, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်တွင်လူများကရာဇဝတ်ကောင်အနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုထီပေါက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်, ဖျက်ဆီးနဲ့ဟက်ကာကုမ္ပဏီများမှဘီလီယံကုန်ကျပါပြီ. နောက်ဆုံးရဘာတစ်ခုမှ-အျောဟစျသံ ransomware တိုက်ခိုက်မှုပြီးသားအများအပြားအားနည်းချက်များဖော်ထုတ်ထားပါတယ်.
ကြိုတင်မဲခြိမ်းခြောက်မှုများများ၏ရှေ့မှောက်၌့သတ်ရန်ကြောင့်ပျက်ကွက်လုံခြုံရေးအစီအမံများအတွက်အရေးပါသောအကြောင်းပြချက်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးပညာရှင်များ၏အရည်အချင်းမပြည့်ဖြစ်ပါသည်. အိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပုံမှန် coding မြင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအလုပ်စဉ်းစားသည်, scripting နည်းပေမယ့်မျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြံထက်နှင့်အတူ. ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူ aligned မဟုတ်ခဲ့အားထုတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်.
အများအပြားကအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးပညာရှင်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုကြောင်းဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါ. အဆိုပါအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်တဲ့ professional ၏သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်မှုအတည်ပြုရန်တစ်ခုလုံးအဖြစ်အလားအလာရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်စျေးကွက်ကကူညီ. သတင်းအချက်အလက်စနစ်လုံခြုံရေး Professional ကလက်မှတ်ကြီးထွားလာအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်၏ပင်လယ်၌ (CISSP) ကြောင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စီးပွားရေးအသိပညာအကြား၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ alignment ကိုရန်ရွှေကိုစံအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ. CISSP သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးတကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်. ကမ္ဘာ့အများဆုံးလုံခြုံရေး-သတိအဖွဲ့အစည်းများကတောင်းဆိုနေတဲ့, CISSP သငျသညျကိုထိရောက်စွာဒီဇိုင်းနက်နဲနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်အာမခံထားသောစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်အထောက်အထားများဖြစ်ပါသည်, အင်ဂျင်နီယာ, နှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ခြုံငုံလုံခြုံရေးကိုယ်ဟန်အနေအထားစီမံခန့်ခွဲ.
သငျသညျရှိပါကသင်လုပ်နိုင်သည်5ထဲကဆိုနှစ်ဦးကိုနယ်ပယ်များတွင်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအတွေ့အကြုံအနှစ် 8 CISSP နှင့်သင်၏ domains များစမ်းသပ်ရှောက်သွား. CISSP အကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ကထိုက်တန်စေသည်. အဆိုပါ 8 CISSP ၏ domains များဖြစ်ကြသည်
ဒါကြောင့်သင်ကထက်ပိုရှိပါက5လိုချင်သောနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံအနှစ်, သင်ရုံစတင်ရန်ရန်ရှိသည်. သို့သော် CISSP တစ်ဦးစျေးပေါကုန်ကျစရိတ်မှာမလာပါဘူး. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တစ်ဦးကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏ CISSP Boot တက်စခန်းများတွင်မတက်ရောက်လိုအပ်ပါသည်, CISSP သင်တန်းနှင့် CISSP သင်ယူမှုပစ္စည်းဝယ်ယူ. CISSP စာမေးပွဲကိုကိုယ်နှိုက်ကကုန်ကျစရိတ် $600. အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အခမဲ့ပစ္စည်းအများစုမှာဟောင်းနွမ်းနေ 10 domains များပုံစံ.
ပန်းတိုင်ကောင်းစွာသတ်မှတ်နှင့်နားလည်သဘောပေါက်နေပါတယ်တစ်ချိန်ကအောင်မြင်တဲ့ခရီးစတင်သည်. CISSP စမ်းသပ်နားလည်ခြင်း, ဒါဘာလဲ, သင်စမ်းသပ်ကြောင့်တကယ်အလွန်ကြီးမားသောတာဝန်အဘို့ခိုင်ခံ့အခြေစိုက်စခန်းပေါ်တွင်သင်ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့သတ်မှတ်နိုင်သည်မည်သို့. အဆိုပါရှည်လျားသော6နာရီ 250 မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုစမ်းသပ်, သင့်ရဲ့အသိပညာစမ်းသပ်ရန်, သည်းခံခြင်းနှင့်ဇွဲ. ဒါဟာလေ့လာမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်, အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ, လက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့် CISSP အသိပညာဒေသများအပေါ်ခိုင်မာတဲ့အယူအဆရေးရာဆုပ်ကိုင်.
သငျသညျမေးခွန်းများကိုသက်သေခံအဖြစ်ကောင်းစွာဒိုမိန်းအားလုံးအပေါင်းတို့နှင့်ကျွမ်းကျင်ဖို့ရှိသည်လုပ်ခံရဖို့စိတ်ရင်းအားထုတ်မှုကိုဖြတ်ပြီးပျံ့နှံ့လိမ့်မည် 8 domain များ. CISSP အားလုံးမေးခွန်းများကိုတန်းတူအမှတ်ယူမသွားဘူး. အသီးအသီးမေးခှနျးတှေရဲ့တနျဖိုးက၎င်း၏အခက်အခဲအဆင့်တွင်အခြေခံသည်. ဒီအပြင် 25 မေးခွန်းများကိုစမ်းသပ်သာစမ်းသပ်ရည်ရွယ်ချက်ဆက်ပြောသည်များမှာ. ဤမေးခွန်းများကိုသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်တွက်ချက်ဘို့ rated ကြသည်မဟုတ်. သို့သျောလညျးသငျသညျထိုအစမ်းသပ်စမ်းသပ်မေးခွန်းများကိုနှင့်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောသူတွေကိုအကြားခွဲခြားလို့မရပါဘူး.
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ကြောင်းအခမဲ့နှင့် paid ကဗီဒီယိုပို့ချချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်. အထိရောက်ဆုံးပို့ချချက်များကထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ် Cybrary အပေါ်ကယ်လီ Handerhan. သူမ၏ပို့ချချက်စုံစုံရှိပါတယ်, အမှတ်ဖို့နဲ့အောင်မြင်သော CISSP စမ်းသပ်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်သောအတွေးအခေါ်ဖန်တီး. CISSP အန္တရာယ်မန်နေဂျာတစ်ဦးအနေအထား၌သင်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိ, ဤအရပ်မှအားလုံးသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်အခြေအနေတွင်အပေါ်အခြေခံပြီးရမည်ဖြစ်သည်. အဆိုပါပို့ချချက်အခမဲ့များမှာ.
CISSP စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကြောင့်အိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြင့်သူတို့ကိုရှာသောတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုလက်မှတ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တစ်ဦးကအများကြီးအွန်လိုင်းနှင့်ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် CISSP သင်တန်းများပူဇော်. ဤရွေ့ကား CISSP အတန်းကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးအမြန်ခေါင်းကိုစတင်ပေး CISSP ၏အတိုင်းအတာများနှင့်အသိပညာဒေသများနားလည်သဘောပေါက်အတွက်သိသိသာသာကူညီပေးသည်. သငျသညျမရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံး CISP Boot တက်စခန်းများအဘို့ဤစာမျက်နှာ၏ထိပ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
အောင်မြင်သော CISSP စမ်းသပ်ကြိုးစားမှုကျယ်ပြန့်အလေ့အကျင့်အစည်းအဝေးများအပေါ်အခြေခံသည်. အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးသဘောတရားခိုင်မာအောင်ပညာရှိများနှင့်ရောနှော format နဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအသုံးပြုရပါမည်. CISSP အခက်အခဲအဆငျ့မွငျ့မားဖို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကမျှအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုအနီးကပ်စာမေးပွဲအတွက်ဟုမေးမူရင်းမေးခွန်းများလာခြင်းဖြစ်သည်.
လေ့လာမှုအရ, CISSPs ၏အမြင့်ဆုံးလူဦးရေ, DC အတွက်တည်ရှိသည်, နယူးယောက်နှင့်အတ္တလန်တာဂျော်ဂျီယာ. အမြင့်ဆုံးပျမ်းမျှအားလစာနှင့်အတူမြို့က NYC ခဲ့သည်, $ 119.840 / နှစ်မှာလာမယ့်.
သတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေးဗိသုကာ Professional က (CISSP-ISSAP). အဆိုပါဗိသုကာပညာရှင် function C-suite ကိုနှင့်အထက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်နှင့်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအကြား fit ကြောင်းတာဝန်များကိုအတူသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးဌာနအတွင်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍ.
ထိပ်တန်း3CISSP အွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ
April 5, 2018 /2 မှတ်ချက်များ/အားဖြင့် ဂျိမ်း Edge
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-5.png 500 500 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-04-24 18:36:26အကောင်းဆုံး CISSP အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
ထိတှေ့ & info
မူဝါဒများ & ထုတ်ဖော်
CISA သင်တန်းများ & လက်မှတ်ပေးခြင်း
အကောင်းဆုံး CISA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများ
အကောင်းဆုံး CISM လေ့လာမှုပစ္စည်းများ & ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများ
မူပိုင်ခွင့်© 2018 CrushTheInfoSecExams.com. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်.